ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : အရိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီး ကိစ္စ မေမြို့ NLD ပြန်ရှင်း
အရိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီး ကိစ္စ မေမြို့ NLD ပြန်ရှင်း
ဧရာဝတီသတင်းဌာနက ယမန်နေ့က မေမြို့ ( ပြင်ဦးလွင်)မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်အတွင်း တင်ပြစာပေး ရန် ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် ရိုက်နှက်ခံရပြီး ဆေးရုံတက်၊ ကုသရတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး က ပြင်ဦးလွင် NLD တွေကို ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ- ပြင်ဦးလွင် NLD ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာ
ဧရာဝတီ သတင်းထောက် မန်းသာလေး ရေးသားတင်ပြထားတဲ့ အရိုက် ခံခဲ့ရသည်ဆိုသည့် အမျိုးသမီး က ပြင်ဦးလွင် NLD များကို အမှုဖွင့် (http://burma.irrawaddy.org/archives/42215) ဆိုတဲ့ သတင်း
ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်အတွင်း NLD လုံခြုံရေးများ၏ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ဆေးရုံ တင်လိုက်ရသည် ဆိုသည့် အမျိုးသမီးက ပြင်ဦးလွင် NLD လုံခြုံရေးများကို အမှုဖွင့်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
NLD လုံခြုံရေးများ ရိုက်နှက်သဖြင့် ဆေးရုံတက်ခဲ့ရသည့် မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်သည် ယနေ့ ဆေးရုံ က ပြဆင်းလာပြီ ဖြစ်ပြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ဝက်ဝံ ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
“ကျမ ဒီနေ့ ဆေးရုံက ဆင်းဆင်းချင်း ၀က်ဝံရဲစခန်းသွားပြီး အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ စခန်းက စစ်ချက် ယူနေပါပြီ” ဟု မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်က ပြောသည်။
မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်သည် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သောကြောင့် ပြင်ဦးလွင်ဆေးရုံတွင် ၃ ရက်အကြာ တက်ရောက် ကုသ ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီး ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ဆင်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးရုံ ရှိ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်များက ဆေးရုံ တပတ် တက်ခိုင်းသော်လည်း ၎င်းသားငယ်၏ လုံခြုံရေးကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် ဆေးရုံတွင် ၃ ရက်သာ နေပြီး အိမ်တွင် ဆက်လက် ကုသလျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သတင်းဖော်ပြပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်ပိုင်းကပဲ ပြင်ဦးလွင် NLD က ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=199557523535477&set=a.100595103431720.904.100004436910938&type=1&theater) အောက်ပါ အတိုင်း တုံ့ပြန်ရေးသား ထားပါတယ်။
9.6.2013 နေ. အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ဦးလွင် ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီး တဦး ၏ သတင်းအမှားများတွေနေရပါသည်၊ ၄င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိကျခိုင်လုံတဲ့ သက်သေ အထောက်အထား များ ရှိပါသလား၊ ၄င်းအမျိုးသမီး အရိုက်ခံရပြီး ဆေးရုံးတက်ရသည်ဆိုသော ဆေးရုံးကို စုံစမ်းပြီပြီးလား သတင်းမှားနေပါသည်။
အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည် ပြင်ဦးလွင်ခရီးစဉ်အတွက် တိုင်စာ ၊မြေယာကိစ္စ၊ကျန်စာများ ကို
တစ်ပတ်ကြို တင် လက်ခံပေးခဲ့ပါသည်။
၉.၆.၂၀၁၃ နေ. တွင်လည်း ပွဲ ရှေ.မှာ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရုံး ဖွင့်လှစ်ပြီး စာများလက်ခံ ခဲ့ပါသည်။
၄င်းအမျိုးသမီး ၉.၆.၂၀၁၃ နေ.ဟောပြောပွဲ ကိုလာသည်ကို သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ကိုယ်တိုင်တွေ. ရှိခဲ့ပါတယ်၊သူမ မေးခွန်းမေးရန်လက်ထောင်ပြခြင်း လုံဝ မရှိခဲ့ပါ။ ကွင်းအတွင်း သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ.၀င်အင်းအား (၅၀) အထက် တာဝန်ချထားပါသည်။
၄င်းအမျိုးသမီး ဟောပြောပွဲ ပြီးခါနီး အချိန် စာများပေးခဲ့ပါသည်လုံခြုံရေးတဦးမှာ ၄င်းစာကိုယူပြီး သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး သို.လျွှဲအပ်ခဲ့ပါတယ် ။
၄င်းစာများကို ဗဟိုအဖွဲ့ ကိုလွှဲပေးခဲံပါတယ်။၉.၆.၂၀၁၃ နေ. တိကျခိုင်လုံသော သတင်းများ ကို ပြင်ဦးလွင်မြို.နယ် သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ထံ စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
တဖက်သတ်သတင်းအမှားကြောင့် အဖွဲ.ချုပ်ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။